E guzobere SPL na 2001 ma bụrụ ụlọ ọrụ nke Lianhe Chemical Technology Co., Ltd. (Kee koodu 002250). SPL emi odude ke Baoshan obodo ụlọ ọrụ ogige na Shanghai, na ezigbo mma Njikọta na iga usoro, nso agbata obi na ná mgbanaka ụzọ nke shanghai, na 13km n'ebe Hongqiao mba ọdụ ụgbọ elu, na 12km n'ebe Shanghai Railway Station. E wuru ụlọ ọrụ SPL na mpaghara 27,000m2, nke gunyere isi ulo ulo nke 18,000m2. Companylọ ọrụ ahụ bụ ISO 9001: 2015 kwadoro ma na-agbasosi ụkpụrụ nduzi ike n'okpuru usoro njikwa Ogo a.
SPL bụ ọkachamara na mmepe, imewe, ahịa na ntụgharị ọrụ maka ngwa ngwa mgbanwe ngwa ngwa. Anyị isi na ngwaahịa ndị Evaporative condenser, Air oyi, Evaporative ikuku oyi, Emechiela circuit jụrụ ụlọ elu, Refrigerating inyeaka ngwá, mgbali arịa, ice nchekwa oyi usoro nke mezuwo D1 na D2. E nwere ihe karịrị 30 usoro na 500 ụdị nke ngwaahịa na-ọtụtụ-eji Air Compressor Jụrụ, Metallurgical Ọkụ jụrụ, Vacuum Ọkụ Jụrụ, Agbaze Ọkụ Jụrụ, HVAC jụrụ, Mmanụ na ndị ọzọ Usoro Fluid Jụrụ, Ground Source Okpomọkụ mgbapụta System jụrụ, data Centers, Frequency converters, Injection Machines, Printing Lines, Drawbenches, Polycrystalline Furnaces, wdg maka nri, ebe omume biya, ahịa ọgwụ, chemical, photovoltaic, Metal gbazee ụlọ ọrụ wdg
Anyị isi n'ichepụta ngwá na-imported kpọmkwem site Germany.
Anyị nwere 6 agadi injinia, 17 injinia, 24 nnyemaaka injinia na anyị R&D center, ha niile bụ ndị dọkịta ma ọ bụ prọfesọ si University of Science and Technology nke China.
Jighiri Ogo Njikwa
3.1 Isi Ihe Akụrụngwa.
55% Aluminium—- Uru: Mgba ọkụ ọkụ, ogologo ndụ
43.4% Zinc—- Uru: Iguzogide nsị
1.6% Silicon —- Uru: Okpomọkụ na-eguzogide
Super Galum bụ aha aha maka 55% aluminum-zinc ntekwasa ígwè. Super Galum na-ekpo ọkụ nke ukwuu ma na-eguzogide ọgwụ, na-ejikọta ihe onwunwe nke aluminom nke na-eme ka ogologo oge dị elu, nguzogide ọkụ dị mma, ọdịdị, na nke zinc nke na-enye nguzogide ọkụ dị elu na nchebe corrosion dị mma. Super Galum bụ atọ na isii mes karịa corrosion na-eguzogide ọgwụ karịa akwa zinc mgbe niile.
A na-arụpụta ihe ndị na-emechi SPL na-arụ ọrụ na SPL site na igwe nchara nchara dị elu na-agbaso usoro njikwa njikwa kacha sie ike. A na-enyocha sekit ọ bụla iji mesie ihe kachasị mma.
Chebe eriri igwe megide corrosion, a na-etinye eriri n'ime igwe nchara siri ike ma tinyezie ọgbakọ ahụ dum na zinc a wụrụ awụ (kpoo ọkụ ọkụ) na 427oC, a na-etinye tubes na ntụziaka nke mmiri mmiri iji nye ezigbo mmiri mmiri.
Cablọ nke BTC nakweere dacromet bolt iji jikọọ, inoxidability zuru oke karịa mkpọchi nkịtị, ugbu a ọ na-emesi obi ike na oyi na-arụ ọrụ ogologo oge.
SPL'S nanị patented mmezi free ịgba nozulu na-anọgide clog-free mgbe na-enye ọbụna na mgbe nile mmiri nkesa nke a pụrụ ịdabere na, ọnụ ọgụgụ -free evaporative jụrụ n'okpuru niile ọrụ ọnọdụ. Ọzọkwa, a na-etinye nozzles na corrosion - n'efu ọkpọkọ mmiri ma nwee eriri oghere.
Otu, ihe ndị a jikọtara ọnụ iji nye mkpuchi mkpuchi enweghị atụ yana mgbochi mgbochi, nke na-eme ka ụlọ ọrụ ha kacha mma na-arụ ọrụ na-enweghị mmebi, usoro nkesa na-enweghị mmiri.
Nnukwu arụmọrụ Siemens na-anya moto, na oke mmiri na obere mkpọtụ. Ọ na-eji usoro mmechi emechi emechi emechibidoro nke ọma, ị ga-efu mmiri na ogologo ndụ.
Igwe elektrọnik de-scaling na-enye 98% mmụba nke ọma karịa mgbochi mmiri na ihe karịrị 95% mụbara nsị na algae na-ewepu teknụzụ elektrọniks dị elu. Ezubere karịsịa maka ụlọ elu ndị na-emechi emechi mechiri emechi na ndị na-ekpo ọkụ evaporative nwere ike oriri dị ala.
Patented PVC n'ụgbụgbọ mmanụ abụ ụdị nri
A na-ahazi SPL® jupụta na nke ejiri na S Line evaporative condenser na ụlọ elu jụrụ iji mee ka ikuku na mmiri na-agwakọta nke ukwuu maka mbufe ọkụ. Ndụ mmiri pụrụ iche pụrụ iche na-ekwe ka ibu mmiri buru ibu na-enweghị oke nrụgide. Ejiri polyvinyl chloride na-adịghị arụ ọrụ, (PVC). Ọ gaghị ere ure ma ọ bụ mebie ma kee ya iji gbochie mmiri ọkụ nke 54.4ºC. N'ihi ụzọ pụrụ iche nke mmanụ a honeyụ-ụyọkọ nke a na-ejikọta ibe akwụkwọ ndị a kpụrụ akpụ, na nkwado nke ala nke ngalaba juputara, a na-emeziwanye usoro nhazi nke ihe jupụtara na ya, na-eme ka afọ ju ya dị ka ikpo okwu na-arụ ọrụ. Ihe mejupụtara a họpụtara maka Condenser na Cooling Tower nwere àgwà ndị na-eguzogide ọkụ.
Site na usoro ihe eji egwu mmiri abụọ, a na-ejide ụmụ irighiri mmiri na nkwụsị nke na-abanye, na-ebelata nsogbu nkwụsị. Uche SPL pụrụ iche maka ụdị SPL niile N na-agbakwunye mpaghara bekee. A na-egbochi ìhè anyanwụ kpọmkwem n'ime mmiri dị n'ime condenser na ụlọ elu jụrụ oyi, si otú ahụ na-ebelata ikike nke algae guzobe. A na-ebelata ọgwụgwọ na mmezi mmiri nke ukwuu. Ọ bụ ezie na ọ nwere ihe dị omimi nke na-eweghachi mmiri na igbochi ìhè anyanwụ, imewe ihe eji eme ihe nwere obere nsogbu dị ala. Obere nrụgide na-ebute ike oriri ike, nke na-ebelata ụgwọ ọrụ nke ụlọ elu jụrụ oyi.
Basin mkpọda nwere ikpochapụ dị mfe
Usoro BTC-Newdị ụdị ọhụụ nke ọwa mmiri nke Patented Design
A na-emepụta oghere mmiri ọhụrụ na mgbidi dị na mgbidi iji mee ka mmiri mmiri ozuzo ahụ belata, belata mkpọchi na mbibi nke mgbidi, na-eme ka mmetụta dị ntakịrị na akara na ọdịdị niile, ma gbatịkwuo ọrụ ahụ.
Ezubere ngwaahịa SPL iji zipu na kit site na nke dabara na ihe.
Ọnụ ụzọ buru ibu na ime ụlọ na-emesapụ aka na-eme nyocha na nrụzi dị mma. Sloped ladder N'èzí dị mfe ịrị na ala.
Bọọlụ bọọlụ na nyo nke SPL Series nwere ike inyocha wee rụzie na-enweghị ịkwụsị ọrụ nke condenser n'ihi otu ụzọ maka ikuku na mmiri. Enwere ike nyochaa nozzles na eriri igwe n'oge arụ ọrụ.
3.2 Emechara Ngwa Ule.
Anyị raara onwe anyị nye iwu ụlọ ọrụ mbụ, mepụta ngwaahịa ndị mbụ. CTI (Jụrụ Technology Institute) si USA gbaara anyị jụrụ owlọ elu kwa afọ, anyị ngwaahịa arụmọrụ nyere anyị na-eduga ọnọdụ na China.
China Fist gas gas na-ekpo ọkụ oru ngo na CNOOC
China Fist sọlfọ dioxide odide osisi mgbake oru ngo na West Mining
E guzobere SPL na 2001 ma na-emepụta ndị na-agbanwe ọkụ maka afọ 20. Anyị nwere n'ime ụlọ nnyocha na mmepe ike, nakwa dị ka ụlọ ọrụ-elu larịị na nhazi, okpomọkụ ọgwụgwọ, machining, nke anụ ahụ na chemical ule, àgwà akara ikike.
A ìgwè nke magburu onwe pesonel a raara nye elu àgwà chemical okpomọkụ-mgbanwe ngwá na ọtụtụ iri afọ nke ahụmahụ na R&D na n'ichepụta. Ndị otu ahụ gụnyere ndị injinia isii, ndị injinia 17, ndị nnyemaka injinia 24, na ndị ọrụ ntanetị 60. Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu na ngwa nyocha site n'ụlọ na n'ụgbọ, dị ka ụlọ ọrụ ịgbado ọkụ na-akpaghị aka, igwe X-Ray, igwe ultrasonic, igwe na-awụ akpata oyi n'ahụ, igwe nyocha. SPL si ụlọ ọrụ na-eduga ọnọdụ na-ekwe nkwa site n'ụzọ zuru ezu na-ewebata ọhụrụ technology maka n'ụlọ na n'ụgbọ, na-ewere uru, na magburu onwe machining Usoro na nkà.
Na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta ọnọdụ mmeri ka a na-ahụta dị ka ihe mgbaru ọsọ dị oke mkpa maka mmepe ụlọ ọrụ
Site n'ịrụzu ezi omume,
Ndi otu anyi jisiri ike mekota ihe ndi ozo, mmekorita,
ỌRES NA-EME NA ND THAT KWURU ANY HAS NYERE ND CON ỌZỌ ANY!!
COMlọ ọrụ akwụkwọ
Elekwasị anya na mmepe, imewe, n'ichepụta, ahịa na oru ngo nke ọrụ nnyefe okpomọkụ;
Mepụta mmekọrịta chiri anya na Shanghai Jiao Tong University, South China University of Technology, Shanghai Ocean University, East China University of Science and Technology, Mahadum Harbin nke Azụmaahịa,
Inwe otu mba mepụtara patent na 22 ịba uru nlereanya nchọpụta Kemịkalụ;
Bụrụ teknụzụ na ebe nyocha nke Mahadum South China nke teknụzụ na enwekwu ike ikpo ọkụ na nchekwa nchekwa;
Soro na nhazi nke ụkpụrụ 6 Shanghai dị ka:
✔ “Evaporative condensers ike ịrụ ọrụ na-ejedebe uru na njikwa arụmọrụ ike”
"Oyi nchekwa nchekwa oriri kwa unit mmachi uru na ike arụmọrụ arụmọrụ"
“Standardlọ ọrụ njikwa usoro njikwa ọrụ”
✔ “Amonia oyi nchekwa nchekwa nchekwa norms”
✔ "Emechiri emechi jụrụ ụlọ elu ume arụmọrụ ụkpụrụ"
✔ "Pultrusion ịkpụzi usoro axial ofufe ike arụmọrụ na ume-azọpụta nwale ịgba ụkpụrụ"
Soro na ọkọlọtọ “Nnọọ-n'ịnyịnya n'ibu ventilashion evaporative refrigerant condenser laabu ule ụzọ” Nwa maka National Refrigeration Standardization Kọmitii Kọmitii.
✔ Nwee ndị ọrụ R&D ndị magburu onwe ha na ndị ọrụ nwere nkà nwere ọtụtụ ahụmahụ.
✔ Nwe D1, D2 nrụgide arịa na imepụta ikike.
✔ Nwe ISO9001-2015quality management system certificate.
✔ Nwezu ikike nrụnye nrụgide GC2 nke gị.
✔ Zụlite sọftụwia nyocha sọftụwia na Shanghai Ocean University, ma nye gị kọmpụta ndebanye sọftụwia kọmputa maka NCAC.
✔ Shanghai Science na Technology Giant ozuzu Enterprise.
✔ Shanghai Science and Technology Invention - Nrite nke Abụọ.
✔ Shanghai Contract Ebe E Si Nweta AAA Klas.
✔ Membertù Na-achị Isi nke Shanghai Science and Technology Enterprises Association.
✔ Onye otu òtù Shanghai maka Nkwalite Sayensị na Teknụzụ.
✔ Okwu mbụ nke Shanghai Gaoqiao Sinopec catalytic cracking jụrụ oru ngo;
Ọnọdụ ikpe mbụ nke CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) nke gas na-eme ka ikuku jụrụ oyi gas;
✔ Ọnọdụ mbụ nke obodo nke WESTERN MINING sọlfọ dioxide condensing recycling project;
✔ Ọnọdụ mbụ nke mba nke XIN FU biochemical ethyl acetate evaporative jụrụ oru ngo;
Ngosi ike ike ngosi
Mara ihe banyere anyi, gha enyere gi aka
- Ajuju na ịgba izu na-akwado afọ iri abụọ maka ahụmịhe ọrụ friji.
- Nka na ụzụ Ọzụzụ akụrụngwa;
- Ntinye ma wepu nsogbu nsogbu;
- Ndozi na mmezi;